नेपाल आज | मोदीसंग तुलना हुनु राहुलको राजनैतिक भबिष्यको लागि राम्रो (भिडियोसहित)
काठमाडौं । भारतमा लोकसभा निर्वाचनमार्फत सत्तारुढ दल भाजपाको अभूतपूर्व विजयसंगै नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । भाजपाको जित र प्रधानमन्त्री मोदी झन शक्तिशाली भएसंगै नेपाल सम्बन्धमा पर्ने असरका बारेमा समेत विचार विमर्श हुन थालेको छ ।
वैदेशिक मामिला जानकार एवं विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार भाजपा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जितले नेपालको आपतको अध्याय सुरु भएको छ । मोदीले जिते नेपाललाई आपत पर्ने र नजिते महाआपत पर्ने विश्लेषण गरेका सुवेदीले लोकसभाको परिणामसंगै केही गम्भीर आपत पर्न सक्ने प्रक्षेपणसमेत गरेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘ अब नेपालका केही राजनीतिक दल र नेताहरुले उपलब्धी मान्दै आएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता उल्टिन सक्छ । यसका लागि भारतले मात्र नभइ चीनले पनि नेपालमाथि दवाव सृजना गर्नेछ । यो दवाव झेल्नु यहाँका दलहरुलाई ठूलो आपतको विषय हो । ’
‘नेपालको संविधानका यी तीन विषयमा भारत र चीनले पहिले देखि नै रिजर्भेसन राखेपनि यहाँका नेताहरु अमेरिका र युरोपियन युनियनको प्रभावमा परे । पश्चिमाहरुले भने अनुसार नै आन्दोलन र जनताको म्याण्डेट विपरीत केही नेताहरुले जबर्जस्ती गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादे । यसबाट भारत, चीन खुशी छैनन् । अब पनि यी एजेण्डामा पुनर्विचार नगरे प्रदेश नम्बर २ टुक्रिन सक्छ । यो टुक्र्याउने काम अरु कसैले होइन, अमेरिकाले गर्नेछ । ’ सुवेदीको तर्क छ ।
भारतमा भाजपा र त्यसमा पनि अझ मोदीलाई हराउन अमेरिकाले सक्दो प्रयास गरेको हो । मोदीबारे दुष्प्रचार गरी वद्नाम गर्न खोज्यो, विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरी चुनावमा हराउन पनि प्रयास गर्यो, तर सकेन । अब अमेरिकाले भारत र चीनविरुद्ध नेपाल र पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्न थप बल गर्नेछ ।
नेपालमा अमेरिकी एजेण्टहरु प्रशस्त छन् । भारतका श्यामशरणजस्तै थुप्रै मानिसको अनुहार नेपाली भएपनि कतिपय तिनीहरुको मन पाकिस्तानी छ भने कतिपयको अमेरिकी । अझ नेपालमा त भारतको विरोध गर्नु र पाकिस्तानको समर्थन गर्नु भनेको राष्ट्रवाद हो । यस्तो सोचाइले आत्महत्याको बाटो सिवाय अन्त कहीँ लैजाँदैन ।
भारतमा चुनावको पूर्व सन्ध्यामा पुलुवा आक्रमण भयो । त्यसमा नेपाल सरकारले के प्रतिक्रिया दियो ? त्यो सरासर पाकिस्तानको पक्षमा थियो । त्यति ठूलो आक्रमण हुँदापनि आतंकवादीलाई कारवाहीको माग गर्न नसक्ने नेपाल सरकार मोदीका लागि कसरी प्रिय हुनसक्छ ? त्यसको प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पनि नेपालमाथि पर्नेछ ।
अहिले विश्व राजनीतिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चीनका राष्ट्रपति सी जिनिपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच राम्रो तालमेल भैरहेकाले त्यो अमेरिकाका लागि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
आफना दुई छिमेकी मुलुकसंग घनिष्ट सम्वन्ध राखी उनीहरुका चासोका विषयसमेत सम्बोधन गरी अघि बढ्नु नै नेपालको हितमा छ । अन्यथा मुलुकको सार्वभौमिकता पनि जोगिन्छ, जोगिन्न त्यसै भन्न सकिन्न ।